Tirada Dadka ku dhintay Dalka Nicaragua oo sii korortay iyo wa... | Universal Somali TV
Tirada Dadka ku dhintay Dalka Nicaragua oo sii korortay iyo walaac laga Muujinayo
Waxaa sii kordhaya Tirada dadka ku dhimanaya dibad baxyada siyaasadeed ee ka taagan wadanka Nicaragua afartii bil ee la soo dhaafay oo looga soo horjeedo xukuumada dalkaasi.
Hey,ada u dooda xuquuda aadanaha ee Human Rights ayaa warbixin ay soo saartay waxaa ay sheegtay in 264 ruux ay ku dhinteen dibad baxyada looga soo horjeedo dowlada oo mucaaradka Garwadeenka ka yihiin.
Warbixinta ayaa intaa raacineysa in 1,800 ay ku dhaaawacmeen dibad baxyada kuwaasi oo u badan dadka rayidka.
Madaxweynaha Dalkaasi Daniel Ortega ayaa Gaashaan u daruuray baaq loo jeediyay oo ahaa in la qabto doorasho lagaa soo hormariyey waqtigeeda oo mucaaradka dalbanayaan.
Dhanka Kale Mucaaradka dalkaas ayaa qorsheynaya dibad baxyo guud oo dalkaasi ka bilowda waxaaana dibad bixii maanta ka dhacay magaalada Managua ay shacabka ugu baaqeen in ay soo baxaan.
Dibad baxayaasha ayaa ku qeylinaya erayo lidi ku ah madaxweynaha oo ah in uu is casilo waxaana ay sidoo kale ay ku eedeyeen xaaskiisa oo ah madaxweyne ku xigeenka dalkaa Marwo Rosario Murillo in ay wado Ficilo ay ku sheegeen kali talisnimo.
Hey,adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeysay Saraakiisha Ciidamada amaanka ee dalkaasi in ay geysanayaan tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Madaxweyne Daniel Ortega oo la hadlay kumanaan taagerayaashiisa ah ayaa waxaa uu u sheegay kuwa dalbanaya in uu xafiiska ka tago loo baahan yahay in ay codad ku yimaadaan,isaga oo ugu baaqay in cid walba looga baahan yahay in ay ixtiraam u muujiso mudo xileedka dowlada.
Kan-xigaDibad bax ka dhacay Nairobi oo saamey...
Kan-horeMadaxweyne Trump oo Gaaray Landon iyo...
39,219,406 unique visits